(tonga teto avy amin'ny Epistola pastoraly)
ny Epistily voalohany ho an' i Timôty na Epistola voalohany ho an' i Timôte;
sy ny Epistily faharoa ho an' i Timôty na Epistola faharoa ho an' i Timôte;
Ny Epistily voalohany ho an' i Timôty na Taratasy voalohany nosoratan' i Masindahy Paoly ho an' i Timôte no anantitranteran’ i Paoly ny amin’ ny famonjena azo avy amin’ ny finoana an’ i Jesoa Kristy. Teo anelanelan' ny taona 62 sy 64 no nanoratana ity epistily ity.
Ampianariny ny fitodran-tena anjakan' ny fanaovana asa tsara. Ambarany koa fa tokony ho olona mendrika halain-tahaka ny mpitandrina sy ny loholona misahana andraikitra ary ny diakona na diakra. Tian' i Paoly raha manaraka ny lalana tena izy ny fitantanana ny fiangonana. Noho izany dia tokony tsy avela hanjaka ny fahadisoan’ ireo milaza tena ho manam-pahaizana momba ny Lalàna; tokony hosakanana koa ny fianteherana amin' ny angano sy amin' ny tetiarana namboamboarina ary amin' ny fadifady ara-tsakafo isan-karazany. Mibahana ao ny fampianarana satria ilaina ny maneho ny fahamarinana mba hiadiana amin' ny fampianaran-diso izay miely izaitsizy.
Ny Epistily faharoa ho an' i Timôty na Taratasy faharoa nosoratan' i Masindahy Paoly ho an' i Timôte dia itodihan' i Paoly ny lasa sady ibanjinany ny hoavy ary anatrehany ny ankehitriny. Teo anelanelan' ny taona 62 sy 64 no nanoratana ity epistily ity.
Miresaka ny amin' ny fijoroan' i Timôty ho vavolombelon' ny Filazantsara (na Vaovao Mahafaly) izy. Resahiny koa ny amin' ireo fahasoavana azony noho izany fijoroana izany sy ny hevitry ny fijalian' ny Apôstôly. Derainy ny fahamalinan' i Timôty mpitondra fiangonana manoloana ny fampianaran-diso sy manoloana ny zavatra mety hahavery ny olona amin' ny andro farany. Manamafy ny maha zava-dehibe ny fiderana sy ny tokony hahaizana mitondra ireo ondry mania koa ilay taratasy. Asehony fa misy tanjona ny fahorian' i Paoly, dia ny hahasoa ny mpino ho vonjen' ny finoany. Hazavainy fa ny finoana dia fanekena ny fampianarana madio sy fitokisana amin' izany.
Nampahatsiahivan' i Paoly ny toetra tokony hananan' ireo mpiandraikitra ao amin' ny fiangonana, nokianiny koa ireo fahadisoana sy ireo fiheverana jiosy mifanohitra amin' ny fampianarana kristiana marina (Tito 1). Avy eo dia nanafatra an' ireo antoko samihafa ao am-piangonana izy (Tito 2) ka namarana ny taratasy amin' ny fampahatsiahivana ny fiasam-pahasoavan' Andriamanitra izay mitondra ny mpino hiaina araka ny Filazantsara (na Vaovao Mahafaly).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_pastôraly&oldid=1012668"
Voaova farany tamin'ny 12 Jolay 2021 amin'ny 08:26 ity pejy ity.